Itoobiya ma la dhihi karaa waxay u jiheysatay wadadii ay martay dalkii la oran jiray Yugoslavia?… – Hagaag.com
Itoobiya ma la dhihi karaa waxay u jiheysatay wadadii ay martay dalkii la oran jiray Yugoslavia?…
Posted on 6 Febraayo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Itoobiya ayaa muddo dhowr bilood ku sameysay isbedel weyn oo aan horey loo arag taariikhdeeda markii uu Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu saxiixay heshiiskii nabadeed oo lala gaaray Eritrea, wuxuu soo afjaray sannooyin xiisado ka dhaxeeyey labada dal ee walaalaha ah.
Keliya ma aha intaasi wuxuu cafis u fidiyey kumanaan qof oo ka tirsanaa kooxaha mucaaradka iyo hay’ado markii hore lagu eedeyn jiray argagixisnimo, wuxuu ugu yeeray mucaaradka dibadaha ku nool in ay si nabad ah ugu soo noqon karaan dalkooda si ay qeyb uga noqdaan dhismaha dalka iyo geedi socodka ka qeyb galka kala guurka hab nabadeed.
Warbaahintii xakameynta ku jirtay oo bilaabay in ay si xor ah uga hadlaan xaaladaha wadanka, waxaa aasaasmay kooxo shaqo iyo xarumo dib loogu habeeyo sharciga iyo xeerarka kuwaasi oo ahaa kuwa dabarka ku xiray oo xakameeyey xuquuqda madaniga ah iyo siyaasada, waxaa intaasi dheer nus ka mid ah golaha wasiirada Abiy waa haween.
Markii halkaasi la marayo, waxaa muhim ah in la sheego isbedelkan degdegga ah oo aan horey loo arag oo ka soo dhex baxay xasilooni daradii dalka aafeysay ee socotay mudada, Itoobiya ayaa ah dal ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan, dadkiisa ayaa gaaray 100 milyan oo qof, wuxuu asalkooda ka soo jeedaan 80 kooxood oo qowmiyadeed oo ku hadla luqado kala duwan, sidaasi darteed ayaa ka dhigeysa arrinta isbedelka Itoobiya qadiyad muhimad khaas ah u leh gobolka.
Sida aan kor ku soo sheegnay isbedelka degdegga ah wuxuu xambaarsanaan karaa khatar gudihiisa ah, furfurnaanta ayaa mararka qaar horseeda isku dhacyo qowmiyadaha, wey fidaa oo weynaataa, waxay soo jiidan kartaa indhaha kuwa aan raalliga ka aheyn furfurnaanta degdegga ah iyo is dhexgalka shucuubta iyo hagaajinta masraxa siyaasada ee guud.
Colaadahani ayaa waxay mararka qaar laga yaabaa in ay riixaan qowmiyada in ay ku dhaqaaqaan arrimo aan sax aheyn, sida goosasho kaasi oo laga yaabo jawaabta ka timaada inuu dhaliyo cawaaiqib xumo aan la mahadin siiba qowmiyadihii colaaduhu aafeeyey.
Kadib markii guuxa iyo is riixriixa qowmiyadaha laga dareemayo dalka gudihiisa hadaba ma la dhihi karaa Itoobiya waxay u jiheysatay wixii ka dhacay dalkii la oran jiray Yugoslavia oo u kala jajabay qowmiyado dowlado sameystay kadib markii colaado qowmiyadeed halkaasi ka dilaaceen oo lagu laayey dad aad u badan.